झापाका विभिन्न क्षेत्रमा शिर्ष नेताको उम्मेद्वारी « epurwa
झापाका विभिन्न क्षेत्रमा शिर्ष नेताको उम्मेद्वारी
प्रकाशित मिति : १६ कार्तिक २०७४, बिहीबार १२:१४
झापा, कार्तिक १६ । राजनीतिक दलका शिर्ष नेताहरुले झापाका विभिन्न क्षेत्रबाट उम्मेदवार मनोनयनपत्र दर्ता गराएका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झापा क्षेत्र नं. ५ बाट प्रतिनिधिसभाको लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउनुभएको छ । सदरमुकाम भद्रपुरस्थित क्षेत्र नं. ५ को निर्वाचन कार्यालय तोकिएको जिल्ला हुलाक कार्यालयमा बिहीबार दिउसो ओली आफ्नो उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभएको हो । ओलीको प्रस्तावकमा एमालेका दमक नगर उपाध्यक्ष लोकबहादुर अधिकारी र समर्थकमा पूर्व क्षेत्रीय अध्यक्ष नेत्रप्रसाद दाहालले रहनुभएको छ । ओलीसंगै प्रदेशसभातर्फ क्षेत्र नं. ५ को ‘क’ बाट हिक्कमत कार्की र ‘ख’ बाट अर्जुन राईले उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभयो । उम्मेद्वारी दर्ता पश्चात् सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा अध्यक्ष ओलीले काँग्रेसको वैमानीका कारण वामगठन्धन भएको स्प्रष्ट पार्नुभयो ।
यस्तै नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले झापा क्षेत्र नं. ३ बाट प्रतिनिधिसभाको लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउनुभएको छ । सिटौलाले पनि दिउँसो जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयमा रहेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उम्मेदवारी दर्ता गराउनुभयो । सिटौलाको प्रस्तावकमा क्षेत्रीय सभापति गणेश पोखरेल र समर्थकमा महाधिवेशन प्रतिनिधि खड्गप्रसाद राजवंशी रहनुभएको छ । उहाँसंगै कांग्रेसबाट प्रदेशतर्फ क्षेत्र नं. ३ को ‘क’ बाट भूमीप्रसाद राजवंशी र ‘ख’ बाट भगिरथ पोद्धारले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । उम्मेदवारी दर्ता पश्चात् नेता सिटौलाले झापामा एमाले, माओवादी र राप्रपाबीचको गठबन्धनले अच्चमित पारेको बताउनुभयो ।
झापा क्षेत्र नं. ३ बाटै वाम गठबन्धनका राप्रपाका महामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनले प्रतिनिधिसभाको लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउनुभयो । उक्त क्षेत्रमा कांग्रेसले सिटौलालाई उम्मेदवार बनाएपछि लोकतान्त्रिक गठबन्धनबाट अलगिएर वाम गठबन्धनको समर्थनमा लिङ्देन उम्मेदवार बन्नुभएको हो । झापा क्षेत्र नम्बर १ बाट वाम गठबन्धनका तर्फ उम्मेदवार बनेका माओवादी केन्द्रका नेता सुरेन्द्रकुमार कार्कीले मुख्य निर्वाचन कार्यालयमा उम्मेदवार मनोनयनपत्र दर्ता गराउनुभएको छ । वाम गठबन्धनले माओवादी केन्द्रलाई झापामा एउटा सिट दिएपछि माओवादी केन्द्रका नेता कार्की उम्मेदवार बन्नुभएको हो । झापा क्षेत्र नं. १ बा कांग्रेस युवा नेता विश्वप्रकाश शर्माले प्रतिनिधिसभाका लागि उम्मेदवारी मनोनयन दर्ता गराउनुभएको छ । उहाँसंगै उक्त क्षेत्रको प्रदेशसभातर्फ ‘क’ बाट केशव पाण्डे र ‘ख’ बाट असोक पोखरेलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् ।
काँकरभिट्टा नाकाबाट यसरी भित्रिन्छ लागुऔषध (भिडियो रिर्पोटसहित)